Xubuntu 18.04 LTS Hagaha Rakibaadda | Laga soo bilaabo Linux
Tilmaamaha rakibida Xubuntu 18.04 LTS
Ya iyada oo la sii daayo Ubuntu 18.04 LTS, dhadhankeeda kale waxay sameeyeen isla dhaqdhaqaaq si loo bilaabo noocyo xasilloon oo kuwan ka mid ah. Kiiskan Waxaan u imid inaan kula wadaago tilmaamahan rakibida yar ee Xubuntu 18.04 LTS.
Xubuntu wuxuu ku sifoobay noqo dhadhan Ubuntu taasi uma baahna ilaha nidaamka badan, sidaas darteed waxaa loo qoondeeyey qaybinta nalka, Ka sokow qaybintaani wali waxay haysaa taageerada nidaamyada 32-bit si ka duwan Ubuntu.
Kahor soo dejinta, waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado shuruudaha kooxdeennu u baahan tahay si ay u awoodaan inay maamusho Xubuntu 18.04 LTS.
1 Shuruudaha lagu socodsiinayo Xubuntu 18.04 LTS
2 Sida loo rakibo Xubuntu 18.04 LTS
3 Nidaamka rakibida Xubuntu 18.04 LTS
Shuruudaha lagu socodsiinayo Xubuntu 18.04 LTS
Si loo maamulo nidaamka loona isticmaalo waxyaabaha muhiimka u ah tan waxaan ubaahanahay ugu yaraan kooxdeena:
Processor leh taageerada PAE
8 GB oo ah meel diskiga bilaashka ah
Kaarka sawirada 800 × 600 xalka ugu yar
DVD drive ama USB dekedda
Shuruudaha lagu taliyay inaad yeelato khibrad aan xadidnayn nidaamka waa:
1 RAM gadaal
20 GB oo ah meel diskiga bilaashka ah
Kaarka sawirada ee taageeraya ugu yaraan 1024 × 1280
Sida loo rakibo Xubuntu 18.04 LTS
Waxaan sii wadi doonaa inaan kala soo baxno goobta rasmiga ah ee iso nidaamka, Waxaan kugula talineynaa inaad ku soo dejiso adoo adeegsanaya Torrent ama Magnet.
Marka soo dejinta la sameeyo, waxaad ku gubi kartaa iso DVD-ga ama USB-ga qaar. Habka loo sameeyo DVD:
Windows: Waxaan ku duubi karnaa Imgburn, UltraISO, Nero ama barnaamij kasta oo kale xitaa iyaga oo aan ku jirin Windows-ka oo hadhowna na siiya ikhtiyaarka ah inaad midig u gujiso ISO.
Linux: Waxay isticmaali karaan gaar ahaan midka ku yimaada jawiga garaafka, waxaa ka mid ah, Brasero, k3b, iyo Xfburn.
Windows: Way isticmaali karaan Universal USB Installer ama Linux Live USB Abuuraha, labaduba waa sahlan yihiin in la isticmaalo.
Linux: Ikhtiyaarka lagugula taliyay waa inaad isticmaasho amarka dd, waxaa muhiim ah inaad iska hubiso halka uu ku xiran yahay USB-ga si loogu sii wado duubista xogta ku taal
Nidaamka rakibida Xubuntu 18.04 LTS
Markaan diyaarinay qalabkeena rakibida, waxaan sii wadeynaa inaan ku dhejino qalabkeena si aan ugu xirno.
Marka tan la sameeyo, shaashadda ugu horreysa waxaan dooran doonnaa rakibida Xubuntu oo aan u oggolaanno inay soo dhigto wax walba oo lagama maarmaanka u ah nidaamka.
Marka nidaamka lagu rakibo kombiyuutarka, saaxir rakibayaasha Xubuntu ayaa soo muuqan doona, shaashadda koowaad ee tan waxay na weydiin doontaa aan xusho luqadda lagu rakibayo nidaamka Xubuntu 18.04 LTS cusub.
Tusaalahan waxaan ku xushaa Isbaanishka waxaanan gujineynaa sii wadida.
Tan waan sameeyay hadda waan ogahay Waxay na weydiin doontaa inaan rakibno softiweer dhinac saddexaad ah iyo sidoo kale inaan ku rakibno cusbooneysiinta Xubuntu halka hawsha rakibaaddu socoto.
Si aan tan u xulno, waxaa lagama maarmaan ah inaan ku xirnaano internetka, marka aan xulano ka aan dooneyno ayaan gujineynaa xiga.
Fursadaha soo socda, Waxay ina tusi doontaa nooca rakibaadda iyo kala-saarista saxannada.
Meeshii aasaas ahaan ama aan masaxno dhammaan diskiga oo aan ku rakibno Xubuntu (ka taxaddar doorashadan, waxay keeni kartaa wadarta xogta luminta)
Ama xulashooyin dheeri ah, waxaan awood u yeelan doonnaa inaan ku meeleyno disk si aan u rakibno Xubuntu ama waxaan sidoo kale abuuri karnaa ama u qoondeyn karnaa qayb loogu talagalay nidaamka aan u siineyno qaabka ku habboon, oo sidan ku sii haray.
Nooca xijaab "ext4" iyo buurta dhibic sida xididka "/".
Ya ka warqabno isbeddelada aan sameyneyno, waan aqbalnaa oo waxaan heli doonaa shaashad digniin ah oo ku saabsan isbeddelada lagu sameynayo diskiga haddii aan ku qanacno oo aan oggolaano in aan aqbalno.
Haddii kale, waxaan kugula talinayaa inaad dib u eegis ku sameysid kala-qaybsanaantaada oo aad ogaatid kuwa aad ku hayso macluumaad muhiim ah iskana ilaali inaad taabato.
Iyada oo tan la rakibayo nidaamka ayaa bilaabmi doona, ikhtiyaarka soo socda waxay na weydiin doontaa inaan dooranno soonaha waqtigeenna si loogu rakibo nidaamka.
Si aan u dhammeyno waa inaan wax abuurnaa koontada isticmaale shaqsiyeed oo leh lambarka sirta ah, Furahan sirta ah waa muhiim inaan xasuusano maadaama uu noqon doono midka aan ku soo gali doonno kuna shaqeyn doonno nidaamka.
Dhamaadka rakibaadda waxaan kaliya ku qasbanaaneynaa inaan dib u bilowno kumbuyuutarka oo aan ka saarno warbaahinta iyo rakibida.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Tilmaamaha rakibida Xubuntu 18.04 LTS
Raul Plazas G dijo
Galab wanaagsan. Waxaan haystaa Ubuntu 17 mana ii oggolaan doonto inaan kor u qaado 18, waxaan ka baqayaa inay ugu wacan tahay awood la'aanta mashiinka. Kaliya waxaan siiyaa cusbooneysiin, iyo markii ikhtiyaarka ah in la cusbooneysiiyo ubuntu uu soo baxo, kaliya kama jawaabayo. Akhriska shabaqa, waxay umuuqataa in xubuntu ay taageerto mishiinno aad uqurux badan, waxaana laga yaabaa inay taasi xal tahay. Si kastaba ha noqotee, ma fahmin sida xubinta loo rakibayo, halkii laga dhisi lahaa ubuntu .. Sideen ku helaa kan keena USB-ga la saaray?
Jawaab Raul Plazas G
Waad salaaman tahay, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii aan soo ceshan karo magaca isticmaale iyo erayga sirta ah ee kombuyuutarkaygii hore (2006), kaas oo la keydiyay iyadoo aan la isticmaalin waxaanan rabaa inaan soo ceshto feylal aan keydiyay, sidaa darteed muddo dheer ayaan ilaaway magaca iyo lambarka sirta ah, ma furi karo PC-ga.
ma jirtaa qaab kasta oo lagu xalliyo tan?
Ku jawaab katy
Waad ku dhajin kartaa darawalka adag kumbuyuutar kale oo Linux ah oo aad wax walba ku koobiyeyn kartaa wadistaada gudaha ah (haddii aan la kaydin)
Waxay u shaqeysaa si caadi ah. Waxaa jira waxyaabo aanan wali aqoon, laakiin xafiisku wuu shaqeeyaa, cilmiga kiimikada-na waxaan dhahnaa haddii hal shay shaqeeyo, si fiican ayey u socotaa.
Beddelka loogu talagalay biraawsarka Firefox ee Ubuntu 18.04 LTS